Kungani amanzi ebalulekile emzimbeni?
Imibuzo nezimpendulo › Kungani amanzi ebalulekile emzimbeni?
Menzi asked 4 months ago
Hector answered 4 months ago
Amanzi ayimpilo: Kumele umzimba ufakwe amanzi ukuze ukwazi ukuqhuba imisebenzi yawo ukukugcina unempilo. Amanzi angehlisa noma aqede izinhlungu zekhanda, ukukhathala kanye nezinhlungu zamajoyinti omzimba. Singahlala amasonto ngaphandle kokudla, kodwa singahlala izinsuku ezintathu nje vo ngaphandle kokuphuza amanzi.
Ingqondo yakhiwe ngamanzi angu-85%: Ingqondo yakhiwe amanzi angu-85%, igazi lona liqukethe amanzi angu-80% kanti amamaseli akhiwe ngamanzi angu-70%..
Adlala indima ebalulekile: Umsebenzi wamanzi emzimbeni ubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi umzimba usebenza ngendlela. Ukungafaki manzi anele emzimbeni kungaholela ekutheni umzimba ukhathale, ungakwazi ngisho nokugxila emsebenzini ngenxa kwako ukushoda kwamanzi emzimbeni.
Aqinisekisa ukuxhumana okufanele ezingxenyeni zomzimba Amanzi enza umsebenzi omkhulu ekugayekeni kokudla, ekuqinisekiseni ukuthi izakhamzimba ziya ezindaweni ezifanele emzimbeni kanye nokunye. Ama-carbohydrates kanye nama proteins asetshenziswa umzimba njengokudla ayahlelwa ebese ehanjiswa amanzi ezingxenyeni zomzimba esebenzisa imithambo yegazi.
Akhipha ukungcola: Amanzi aphinde asize ekutheni akhiphe ukungcola okusemzimbeni, nasiza ekutheni anqande ukusongeleka. Ngokwemvelo, amanzi ehlisa ukulamba futhi ehlise amafutha angadingeki emzimbeni.
Anqanda ukoma futhi abalulekile esikhumbeni: Ukungaphuzi amanzi kuholela ekutheni umzimba wome, nokungagcina sekukubeka engcupheni ngokwesimo sakho sempilo, kwenze amasosha akho omzimba aphelelwe amandla abe engasakwazi ukulwisana nezifo. Lokhu kwenza ukuthi kube lula ukuba ugule. Ukuphuza amanzi kusho impilo, ukusebenza okufanele kwamasosha omzimba, isikhumba esikhazimulayo kanye namandla.
Apholisa ukushisa emzimbeni
Amanzi aphinde asize apholise ukushisa emzimbeni. Yebo iziphuzo ezithize ziyasiza zilekelele osuke ezibandakanye kwimidlalo ethize ukuba athole amandla futhi anqande ukoma, kodwa ongoti abaningi bayavumelana ukuthi amanzi yiwo ahamba phambili. Ukwenza isibonelo nje, umangabe uphuza izingilazi aziyi-12 zamanzi, umzimba ube ususebenzisa aziyisi-8 esikhathini esiyimizuzu eyishumi nanhlanu nje kuphela. Umangabe uphuza isilinganiso esifanayo sesiphuzo esinoshukela umzimba usebenzisa leso siphuzo ngaphansi kwesilinganiso esiyingilazi eyodwa.
Umzimba uyakutshela umangabe ushodelwa amanzi
Ukuba womele amanzi kungenzeka ngisho ngabe yisiphi isikhathi sonyaka, hhayi ehlobo nje kuphela. Ukoma esikhathini sasebusika kungaba ngokuphezulu impela uma kuqhathaniswa nesikhathi sasehlobo. Ukoma kungaholela ekutheni udle kakhulu.
Nomangabe ungeyena umuntu ozibandakanye kwezemidlalo, kubalulekile ukuba uphuze amanzi. Yebo, amanzi ayimpilo.